Nagu saabsan - Nanjing Karlter Qurxinta Waxyaabaha Co., Ltd.
Nanjing Karlter Qurxinta Waxyaabaha Co., Ltd.waa shirkad qalab cusub oo ku takhasusay dhoofinta sagxadda vinylalkohol, SPC adag adag sagxadda vinylalkohol iyo gogosha laminate. Shirkaddu waxay ku taal bariga Shiinaha waxayna aad ugu habboon tahay inay gaarto Dekedda Shanghai. Waxaan u dhoofinnaa tiro badan oo gogol ah Yurub, Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Australia, Koonfur Afrika, iwm. DIBT, Shahaadada Floorscore ee aan soo marnay, waxaan balan qaadeynaa tayada marka hore, iyo kooxdayada kormeerka tayada xirfadeed waxay damaanad qaadayaan inaan ku guuleysan karno tayada ugu fiican.
Wax soo saarkayagu waa kala duwan yihiin cabbir iyo dhumuc, iyo midabbo kala duwan si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee macaamiisha. Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale sameyn karnaa EIR embossing iyo daaweynta dusha sare. Kordhinta dusha sare ayaa sidoo kale kala duwan. Waxaan taageernaa soosaarka OEM iyo xirmo sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha si loo gaaro qanacsanaanta macaamiisha.
Adeeggeena iibka kadib wuxuu sidoo kale si firfircoon u dhageysanayaa fikradaha macaamiisha. Waxaan si firfircoon u bixin doonnaa xalal si aan ugu kabno khasaaraha macaamiisha awgeed masuuliyadeena. Dabcan, mabda'ayaga raadinta kaamil ahaanta ayaa ah in la yareeyo dhacdooyinka xaaladaha noocaas ah, si markaa loo gaaro iskaashiga ku habboon ee labada dhinac, waxaan nahay lammaanahaaga aad ku kalsoon tahay, aan ku soconno mustaqbalka si wada jir ah.
Waxyaabaha ceyriinka ah ee ugu muhiimsan ee soo saarida sagxadda PVC waa polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride waa kheyraad deegaanka u roon oo aan la-cusbooneysiin karin. Waxaa loo isticmaalay nolol maalmeedka dadka, sida bacaha darajooyinka aan cuntada ahayn, bacaha qashinka, dharka dhismaha, iwm. Kuwaas waxaa ka mid ah, qaybta ugu weyn ee dabaqa-caagga ah (xaashi) waa budada dhagaxa dabiiciga ah. Waxaa lagu tijaabiyaa waaxda awood u leh mana ku jiraan walxaha shucaaca ku shaqeeya. Sidoo kale waa shey cusub oo qurxin ku habboon deegaanka. Dabaq kasta oo PVC u qalma wuxuu u baahan yahay inuu ka gudbo shahaadada nidaamka tayada caalamiga ah ee IS09000 iyo shahaadada deegaanka caalamiga ah ee ISO14001.
Ultra-light iyo ultra-khafiif ah
Dabaqa PVC waa qaro weyn yahay 1.6mm-9mm oo keliya, culeyskiisuna waa mitir laba jibbaaran waa 2-7KG oo keliya. Waxay leedahay faa iidooyin aan la qiyaasi karin oo ku saabsan dhismaha miisaanka iyo keydinta boosaska dhismaha, waxayna leedahay faa iidooyin gaar ah oo ku saabsan dayactirka dhismayaasha hore.
Super xiran adkaysi
Dusha sare ee dabaqa PVC wuxuu leeyahay lakab farsamo gaar ah oo tayo sare leh oo daahan u ah lakabka u adkaysta dharka. Lakabka super-abrasive ee si gaar ah loogu daaweeyay dusha sare wuxuu si buuxda u damaanad qaadayaa caabbinta xirashada wanaagsan ee maaddada dhulka. Lakabka xirashada u adkaysta ee dusha sare ee dabaqa PVC waa ka duwan yahay dhumucdiisa. Xaaladaha caadiga ah, waxaa loo isticmaali karaa 5-10 sano. Dhumucda iyo tayada lakabka dharka ayaa si toos ah u go'aamiya waqtiga isticmaalka dabaqa PVC. Natiijooyinka imtixaanka caadiga ah waxay muujinayaan in lakabka dharka qaro weyn ee 0.55mm loo isticmaali karo xaaladaha caadiga ah in ka badan 5 sano, 0.7mm. Lakabka qaro weyn ee dharka u adkaysta ayaa ku filan in ka badan 10 sano, sidaa darteed si aad ah ayey u adkeysataa xirnaanshaha. Sababtoo ah iska caabbinta labiska ee sare, sagxadda PVC waxay caan ku tahay cusbitaalada, iskuulada, dhismayaasha xafiisyada, suuqyada laga dukaameysto, dukaamada waawayn, gaadiidka iyo meelaha kale ee gaadiidka badan wata.
Dabacsanaan sare iyo iska caabin super
Dabaqa PVC waa mid jilicsan oo jilicsan, sidaas darteed wuxuu leeyahay dabacsanaan wanaagsan. Waxay leedahay soo kabasho wanaagsan oo laastik ah iyadoo ay saameynayaan walxaha culus. Dareenka dabaqa la duubay ayaa ka jilicsan oo jilicsan. Raaxada cagaha waxaa lagu magacaabaa "dahab jilicsan oo dhulka ku jira", halka dabaqa PVC uu leeyahay Waxay leedahay saameyn iska caabin ah oo xoog leh waxayna leedahay soo kabasho xoog leh oo laastik ah oo waxyeelo weyn u leh waxyeelo la'aan. Dabaqa PVC ee aadka u fiican ayaa yareyn kara waxyeelada dhulka ku heysa jirka bini'aadamka waxayna kala diri kartaa saameynta cagaha. Xogta cilmibaarista ee ugu dambeysay waxay muujineysaa in shaqaaluhu ay soo dheceen markii sagxadda PVC ee aadka u wanaagsan la dhigay meel bannaan oo dad badani ay qulqulayaan. Heerka dhaawacyaduna waa ku dhowaad 70% ka hooseeya dabaqyada kale.
Lakabka xiran ee dusha sare ee dabaqa PVC wuxuu leeyahay hanti gaar ah oo anti-silbasho ah, marka la barbardhigo walxaha caadiga ah ee dabaqa, dabaqa PVC wuxuu dareemayaa inuu ka adag yahay xaalada biyaha dhegta, waana u badnaan kartaa inuu siibto, taasi waa, inta badan biyaha waa la jajabiyaa. Sidaa darteed, meelaha caamka ah ee looga baahan yahay nabadgelyada guud sida garoomada diyaaradaha, isbitaalada, xanaanooyinka, iskuulada, iwm, waa agabka qurxinta sagxadda la doorbido, oo aad caan uga noqotay Shiinaha sannadihii la soo dhaafay.
Heerka dabka ka-hortagga ee u-qalma ee dabaqa PVC wuxuu gaari karaa heerka B1, iyo darajada B1 waxay ka dhigan tahay in waxqabadka dabka uu aad u wanaagsan yahay, kan labaadna dhagaxa. Gogosha PVC lafteeda ma gubato waxayna ka hortagi kartaa gubashada; ma soo saarto gaasas sun ah oo waxyeelo leh oo waqtiga ilaaliya (marka loo eego tirada ay bixisay waaxda badbaadada: 95% dadka ku dhaawacmay dabku waa qiiq sun ah iyo gaasas ka dhasha gubashada To).
Biyo-xireyaasha iyo qoyaanka caddeyn
Sababtoo ah qaybta ugu weyn ee gogosha PVC waa cusbi vinylalkohol ah oo aan xiriir la lahayn biyo, dabiici ahaan kama baqaan biyaha. Ilaa iyo inta aysan qoynin muddo dheer, ma dhaawici doono; oo qoyaan laguma carraabin doono qoyaan badan awgood.
Nuugista codka iyo yareynta buuqa
Gogosha PVC waxay leedahay qalab caadi ah oo dhulka ah oo aan isbarbar dhigi karin nuugista codka, maqalkiisana wuxuu gaari karaa 20 decibel, sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad doorato gogosha PVC ee aagagga xasilloon sida qaybaha isbitaalka, maktabadaha iskuulka, hoolalka casharrada, tiyaatarada, iwm. garaacista dhulka waxay saameyn ku yeelaneysaa fikirkaaga oo dhulka PVC wuxuu ku siin karaa jawi deggan oo aad u raaxo badan oo bini aadamnimo ku dheehan tahay.
Waxyaabaha lidka ku ah bakteeriyada
Dusha sare ee dabaqa PVC waxaa lagu daaweeyay daaweyn bakteeriyada gaar ah. Dusha sare ee dabaqa PVC sidoo kale waxaa si gaar ah loogu daray walxaha jeermiska dila. Waxay leedahay awood dil xoog leh waxayna horjoogsataa awoodda bakteeriyada ay ugu tarmi karto bakteeriyada badankeeda.
Goynta iyo kalagoynta waa mid fudud oo fudud
Adoo adeegsanaya mindi adeegsiga wanaagsan, waad ku goyn kartaa sidaad doonto, waxaadna u isticmaali kartaa isku darka agabyada midabbada kala duwan si aad u siisid ciyaar buuxda farsamada naqshadeeyaha isla markaana aad ku gaarto saamaynta qurxinta ugu habboon; kugu filan inaad ka dhigto dhulkaaga inuu noqdo shaqo farshaxan oo noloshaada ka dhigo Meel bannaan waxay noqotay qasri farshaxan, farshaxan ka buuxo.
Tolid yar iyo alxamid aan xuduud lahayn
Midabada qaaska ah ee gogosha xaashida PVC si adag ayaa loo rakibay oo loo rakibay, tollooyinka ayaa aad u yar, dushana waa ku dhowaad aan laga arki karin meel fog; Gogosha PVC ee gariiradda waxay noqon kartaa mid gebi ahaanba aan lahayn qalab tiknoolaji ah oo aan fiicnayn, taas oo aan macquul aheyn dabaqa caadiga ah. Sidaa darteed, saameynta guud iyo saameynta muuqaalka ee dhulka ayaa lagu hagaajin karaa inta ugu badan; jawi guud ahaan saameynta dhulku sareyso, sida xafiis, iyo bey'ad u baahan jeermis dil iyo jeermis dil, sida qolka qalliinka isbitaalka, sagxadda PVC waa mid ku habboon.
Rakibaadda degdegga ah iyo dhismaha
Rakibaadda iyo dhismaha sagxadda PVC waa mid aad u dhakhso badan, lama adeegsado madaafiic sibidh ah, xaaladaha dhulkuna way wanaagsan yihiin. Waxay kuxirantahay xarkaha ilaalinta deegaanka ee gaarka ah waxaana la isticmaali karaa 24 saac kadib.
Midabbo badan oo kala duwan
Gogosha PVC waxay leedahay midabbo badan oo kala duwan, sida rooga, dhagaxa, sagxadda alwaax, iwm, oo xitaa waa la habeyn karaa. Khadadka ayaa ah kuwo macquul ah oo qurux badan, oo leh qalab midab leh iyo xargaha qurxinta, oo lagu dari karo saameyn qurxin qurux badan.
Acid iyo u adkaysiga daxalka alkali
Waxaa tijaabiyey ururo awood leh, Gogosha PVC waxay leedahay aashito adag iyo caabbinta daxalka alkali, waxay adkeysan kartaa baaritaanka jawiga adag, waxayna aad ugu habboon tahay adeegsiga isbitaalada, shaybaarada, machadyada cilmi baarista iyo meelaha kale.
Dabaqa PVC wuxuu leeyahay habsami u socodka kuleylka, kala-baxa kuleylka oo isku mid ah, iyo isuduwaha balaarinta kuleylka oo yar, oo xasilloon. Yurub, Ameerika, Japan iyo Kuuriyada Koonfureed, Gogosha PVC waa doorashada koowaad ee kuleylka iyo kuleylka kuleylka kuleylka, taas oo aad ugu habboon laamiga guriga, gaar ahaan gobollada qabow ee waqooyiga Shiinaha.
Dayactirka dabaqa PVC waa mid aad ufiican, sagxaduna waa wasakh oo masax ayaa lagu masaxay. Haddii aad rabto inaad dabaqa sii wado, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad sameyso dayactir joogto ah, oo aad uga hooseeya dabaqyada kale.
Deegaanka loo cusboonaysiin karo
Maanta waa xilli la raadinayo horumar waara. Qalab cusub iyo tamar cusub ayaa midba midka kale u soo baxaya. Gogosha PVC waa sheyga qurxinta ee dabaqa oo dib loo isticmaali karo. Tani waxay leedahay muhiimad weyn ilaalinta khayraadka dabiiciga ah iyo bey'ada deegaanka.